Sina Manome fitaovana fanapahana ultrasound 30Khz ho an'ny fanapahana tànana amin'ny robot amin'ny alàlan'ny fanamboarana sy ny orinasa | Qianrong
Cutter Sakafo Ultrasonic Cake
Fanapahana plastika vita amin'ny lamba ultrasonic
Cutter vita amin'ny fantsom-baravarankely
Masinina fanamafisam-peo ultrasonic
Rafitra fanamafisana ny saron-tava ultrasonika
Rafitra fanamafisam-peo 15Khz
Rafitra fanamafisam-peo 20Khz
Masinina fanamafisam-peo vy
Terminator Tube Tube Ultrasonic
Ultrason Welder ho an'ny fanangonana hafanana amin'ny masoandro
Masinina fanamafisana plastika ultrasonic
15Khz Ultrasonic Welder Plastika
20Khz Ultrasonic Welder Plastika
Rafitra fanamafisam-peo Rotary Ultrasonic
20Khz Rafitra fanamafisam-peo Rotary
35Khz Rafitra fanamafisam-peo Rotary
Rafitra fanamafisam-peo ultrasonic
15Khz Famatsiana herinaratra ultrasonic
20Khz Famatsiana herinaratra ultrasonic
28Khz famatsian-tsolika ultrasonic
30Khz Famatsiana herinaratra ultrasonic
35Khz Famatsiana herinaratra ultrasonic
60Khz Famatsiana herinaratra ultrasonic
70Khz famatsian-tsolika ultrasonic
Transducer Welding Ultrasonic
Fanovana fanoloana ultrasonic
15Khz Ultrasonic Transducer miaraka amin'ny Booster
20Khz Ultrasonic Transducer miaraka amin'ny Booster
28Khz Ultrasonic Transducer miaraka amin'ny Booster
30Khz Ultrasonic Transducer miaraka amin'ny Booster
35Khz Ultrasonic Transducer miaraka amin'ny Booster
40Khz Ultrasonic Transducer miaraka amin'ny Booster
60Khz Ultrasonic Transducer miaraka amin'ny Booster
70Khz Ultrasonic Transducer miaraka amin'ny Booster
Fitaovana fitifirana automatisation ultrasonic
Rafitra fanamafisana ultrasonic
Rafitra vovoka metaly ultrasonic
Fitaovana fitsaboana ranon-javatra ultrasonic
Sonochemistry fanandramana ultrasonic
Sonochemistry Industrial Ultrason
Rafitra fitsaboana ny rano maloto ultrasonic
Vokatra namboarina tsy namboarina tamin'ny ultrasonic
Fitaovana fitsapana ultrasonic
20Khz Ultrasonic Customized Welding Horn miaraka amin'ny Anodiz ...
Haavo avo 20khz Ultrasonic Industrial homogeniz ...
Haavo matetika 35Khz 1000w Fitaovana famehezana ultrasonic ...
Ultrasonic Copper Aluminium Fiovam-po 20Khz 3000w Izahay ...
Nickel Mesh sy Nickel Plate Welding avy amin'ny 3000w 20Khz ...
20Khz Ultrasonic Rubber Cutting Device miaraka amin'ny 60mm Bla ...
20Khz 1500w Ultrasonic Welding Transducer miaraka amin'ny vy ...
15Khz 2600w Oscillator mahery vaika mahery vaika ...
Manome fitaovana fanapahana ultrasound 30Khz ho an'ny fampiasana fanapahana tanana amin'ny Robot
Item No. QR-C30Y
gropy Generator nomerika
Zintin'aratra 220V na 110V
Lanjan'ny Blade 1.25kgs
Lanja tsy afa-karatsaka 11.5Kg
Application Mpanapaka lamba
Ny fitsipiky ny antsy fanapahana ultrasonika dia ny fanovana ny 50 / 60Hz amin'izao fotoana izao ho lasa 20, 30 na 40kHz angovo herinaratra amin'ny alàlan'ny generator ultrasonic. Ny angovo elektrika avo lenta dia navadika ho fihoaram-pahefana mekanika mitovy matetika amin'ny alàlan'ny transducer, ary avy eo ny vibration mekanika dia ampitaina amin'ny antsy fanapahana amin'ny alàlan'ny fitaovana modulator amplitude izay afaka manova ny amplitude. Ny fanapahana fingotra ultrasonic dia mihozongozona amin'ny halavany miaraka amin'ny amplitude 10-70μm, miverimberina in-30,000 (30 kHz) isan-tsegondra (ny fihoaran'ny volo dia mikraoskaopy, izay mazàna sarotra ny mahita azy amin'ny masony). Ny antsy manapaka avy eo dia mamindra ny angovo mihozongozona voakarakara mankany amin'ny velaran'ny faritry ny sanganasa ho tapaka. Amin'ity faritra ity, ny angovo mihozongozona dia ampiasaina hanapahana ny fingotra amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny angovo molekiola ao amin'ny fingotra ary ny fanokafana ny rojom-bolo.
Endri-javatra fanapahana antsy ultrasonika napetraka amin'ny milina
1. Mora ampiharina amin'ny famokarana mandeha ho azy.
2. Ny lelan-1mm dia kely very fitaovana.
3. Haingam-pandeha, mahomby ary tsy misy loto.
4. Avo ny refin'ny fanapahana, ary tsy marefo ny fitaovana vita amin'ny fingotra.
5. Ny haavon'ny fanapahana dia manana fahamendrehana tsara ary fampisehoana fatorana tsara.
6. Ny fitaovana dia kely habe ary azo ampiasaina amin'ny fanapahana tànana.
1. Fiorenan-toerana avo lenta: mamokatra hovitrovitra elektromagnetika ny generator ultrasonic rehefa miasa izy, ary avadika ho osilasiôna mekanika ary ampitaina amin'ireo antsy fanapahana sy fitaovana fanapahana. Ny fanapahana mekanika dia tanterahina, noho izany tsy ilaina ny fanapahana maranitra, ary kely ny akanjon-tsabatra, ary miaraka amin'izay dia azo soloina irery ny lohan'ny fanapahana.
2. Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana: Rehefa tapaka ny antsy ultrasonika dia ambany noho ny 50 degre Celsius ny mari-pana amin'ny lohan'ny fanapahana, ary tsy hisy setroka sy fofona hiteraka, izay manala ny loza ateraky ny ratra sy ny afo mandritra ny fanapahana.
3. Fanapahana tsara: satria ny onja ultrasonika dia tapaka amin'ny fihoaram-pahefana avo lenta, ny fitaovana dia tsy hanaraka ny velaran'ny ravina, tsindry kely fotsiny no takiana amin'ny fanapahana, ary ireo fitaovana marefo sy malefaka dia tsy simba sy tonta, ary tapaka ny lamba ary voaisy tombo-kase. Tsy hiteraka chipping.
4. Fandidiana tsotra: ny antsy fanapahana dia mifamatotra amin'ny mpamokatra ultrasonic, ny generator dia mifandray amin'ny herinaratra 220V, ary ny fanapahana dia azo tapahina hanohanana ny fanapahana tànana sy ny milina.
Previous: Tanana mitazona 40khz Ultrasonic Cutter sakafo miaraka amin'ny Generator nomerika tsy misy antsy
Manaraka: Fanapahana ultrasonic miaraka amin'ny Frequency 35Khz amin'ny fanapahana ireo fitaovana mitambatra mifanindry
Telefaona: 0086- (0) 571-58977669